Tag: chart data | Martech Zone
Tag: xogta shaxda
Qof kastaa wuu ogyahay in PowerPoint uu yahay luqadda ganacsiga. Dhibaatadu waxay tahay, inta badan dekedda PowerPoint ma aha wax ka badan taxane isdabajoog ah oo badiyaa la duubo oo badiyaa wareersan oo ay la socdaan soodhaweeyeyaal soojeedin ah oo ay soo bandhigayaashu soo bandhigayaan. Markii aan soo saarnay kumanaan bandhigyo ah, waxaan aqoonsanay hababka ugu fiican ee fudud, laakiin aan dhif ahayn in la shaqeeyo. Ujeedadaas, waxaan abuurnay Xarunta Culeyska, qaab cusub oo loogu talagalay soo bandhigidda. Fikradda ayaa ah in sagxad kasta, slide kasta, iyo qayb kasta oo ka kooban